Malunga nathi -Huizhou Vivibetter Packaging Co., Ltd.
HuiZhou VIVIBetter ukuphakheja Co., Ltd.
HuiZhou VIVIBetter ukuphakheja Co., Ltd. yasekwa ngo-2015 kunye notyalo-mali million 1 yuan. Kukho abasebenzi abangaphezulu kwama-50, kuquka amagcisa-5 kumzi-mveliso kunye 1000 square metres, apho ixabiso lonyaka lilonke yemveliso ifikelele 5 miilion yuan. Sinokubonelela ngenkonzo kuyilo, ukuprinta ukuya kuposiso.
Ukuphucula okungcono, iVIVIBetter iya kuphucula kwaye ihlaziye ngokubanzi ukubethelela ukhuphiswano kunye nefuthe. I-VIVIBetter inyanzelisa umgaqo-nkqubo osemgangathweni wokuthatha inxaxheba kwabasebenzi bonke, ukugcina uphuculo kunye nokugcina ukuzibophelela kubo bonke abathengi. Simisela iNkqubo yoQinisekiso loMgangatho ye-ISO9001 kunye neNkqubo yoLawulo lokusiNgqongileyo ye-ISO14001. I-VIVIBetter iphumelele igama elihle kubathengi ngolawulo lwenzululwazi nolusebenzayo, imveliso ekumgangatho ophezulu, ixabiso elifanelekileyo, ukugcina ixesha kunye nenkonzo efanelekileyo, kubandakanya nenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM.
Ezona mveliso ziphambili kwiVIVIBetter zibandakanya zonke iintlobo zePET kunye nePostile yokupakisha, ibhegi engenawo amanzi, ubhaka ongangeni manzi, izihlangu ezingangeni manzi kunye neiglavu zomqhaphu .mops .izitayile kunye neempahla ezilukiweyo ibhegi yokuthenga njalo njalo. Senza iimveliso ngokwePDF okanye nge-AI kubathengi okanye kuyilo lwabo ukuba kunyanzelekile.
Imakethi yamazwe aphesheya yintsimi yethu ephambili yedabi .Ubusiness obupheleleyo obuvela phesheya buhlala kunye ne80% yenkampani yethu.Sinethemba lokubonelela ngeempahla ezisemgangathweni kubathengi abasuka kwihlabathi liphela.
Isiqubulo sethu sithi. "Umthengi uthixo wethu kunye nomgangatho wethu zibekwa kwindawo yokuqala .Ukucinga ngabathengi nangaliphi na ixesha. Sombulula ingxaki ngokubaluleka"